9 Tilmaamood oo sawiro looga qaadayo xeebta | Abuurista khadka tooska ah
Ma qorsheyneysaa inaad xeebta aado xagaagan si aad sawir uga sameyso? Hadday sidaas tahay, waxaan kugula talinayaa inaad sii wado aqrinta maqaalkan. Hoos waxaan ku soo jeedinayaa talooyin taxane ah oo aanad iska indha tiri karin markaad ka shaqeyneyso sawirrada noocan ah. Kusoo qaadashada sawir xeebta runti waxay noqon kartaa farshaxan iyo baashaal haddii aad taqaano sida ugu badan ee looga faa'iideysan karo kamaraddaada.
Kahor intaanan bilaabin waxaan ku xasuusin lahaa inay jiraan fikrado aad u xiiso badan oo ay tahay inaad tixgeliso sida xasaasiga, xawaaraha wax lagu xiro ama noocyada muraayadaha indhaha ee aad isticmaali karto si aad natiijooyin fiican uga hesho. Waxaan kugula talinayaa inaad ku buuxiso aqrintaan tan maqaalladayada fikradaha aasaasiga ah adduunka sawir qaadista. Iyadoo aan waxbadan la dhihin Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay talooyinkan!
1 Waa maxay kamaradda ugu habboon ee sawirro lagu qaado xeebta?
2 Muraayad noocee ah in la isticmaalo?
3 Mobilka badal ahaan
4 Talooyin markaad gasho
5 Ka taxaddar halabuurka
6 La dagaallan qorraxda oo ka shaqee iftiinka
7 Toosh leh mise bilaa flash?
8 Falanqee jawigaaga waxqabad
Waa maxay kamaradda ugu habboon ee sawirro lagu qaado xeebta?
Waqtiyada xeebta waxay u baahan yihiin qalab sida ugu fudud uguna fudud ee suurtogalka ah. Gaar ahaan haddii aan booqan doonno xeebta dad aad u tiro badan oo soo qulqulaya, waa inaan maanka ku haynaa inay u badan tahay inaan u baahanahay inaan beddelno meelaha inta badan si aan awood ugu yeelanno inaan ka qaadno sawirradayada dhinaca ugu fiican. Inkasta oo ay kuxirantahay nooca warbixinta ama sawirada aad qaadi doontid, waxaan kugula talin lahaa inaad yeelato kamarad caawiya oo aad caadiyan isticmaasho taasna waa mid adkaysi badan oo miisaanka culus leh. Kaamirooyinka is haysta ayaa badanaa iska caabiya sidaas darteed ikhtiyaar wanaagsan ayaa noqon kara in midkood la helo. Haddii aad sii deynayso kamarad cusub oo iswaafaqsan oo aad ka fiirsaneyso suurtagalnimada inaad sawir ka qaaddo biyaha hoostooda, waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso noo maqaalka kamaradaha biyaha (Waxay leeyihiin qiimo aad u hooseeya).
Muraayad noocee ah in la isticmaalo?
Haddii ay dhacdo inaad go'aansato inaad qaadato SLR-gaaga oo aad tixgelinayso suurtagalnimada helitaanka muraayadaha cusub ee sawirradaada laga qaado, waa inaad tixgelisaa nooca sawirrada aad raadinayso. Guud ahaan, sawirrada badanaa lagu qaado xeebta badiyaa uma baahna dherer dherer ballaaran. Waxaan kugula talin lahaa hadii ay suurta gal tahay inaad keento kalluumeysi ama xagal ballaaran, gaar ahaan haddii aad diiradda saareyso muuqaalka oo aad rabto inaad ku siiso sawirradaada firfircooni cayiman. Muraayadaha muraayadaha indhaha waa kuwa ugu talo bixinta badan oo muraayadaha indhaha ee telephoto ga ayaa noqon kara kuwa aad waxtar u leh gaar ahaan marka lagu ciyaarayo cillad la'aan iyo gaaritaanka darbooyin faahfaahsan oo aad u xiiso badan iyo sidoo kale sawirro.
Mobilka badal ahaan
Waxay kuxirantahay nooca sawirada aad rabto inaad qaado. Caqli ahaan, sawirrada lagu qaaday taleefanka gacanta waxay yeelan doonaan tayo ka hooseysa tan kamarad kasta, oo ay ku jiraan kuwa is haysta (in kasta oo ay waliba ku xiran tahay tusaalaha, Iphone tusaale ahaan wuxuu qaadaa sawirro aad u fiiqan iyo kuwa kale ee casriga ah). Dooddu had iyo jeer way kusii socon doontaa miiska waxaanan doorbidaa kamaradaha sida oo kale, gaar ahaan haddii aad rabto inaad hesho natiijooyin xirfad leh.
Talooyin markaad gasho
Kahor toogashada maskaxda ku hay arinta xasaasiga ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad adigu nidaamiso kahor intaanay ku xirnayn xaddiga iftiinka waqtigaas jira. Haddii aad sawirro ka qaadeyso dharaar cad, waxaa lagugula talinayaa inaad u dhigto qiimaheeda ugu hooseeya, guud ahaan waxay ka badan tahay 100 ISO. Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn wax kale xeebta, laakiin waxaa jiri doona iftiin badan. Haddii aad tan hagaajiso ka hor intaadan bilaabin waxaad arki doontaa in waxqabadka aaladda dareeraha uu si aad ah u kordhayo isla markaana sawir qaadista ayaa muujin doonta muujinta dhawaaqa hoose, daaweynta midabka ka fiican iyo fiiqnaanta weyn, marka lagu daro waxaad ka ilaalin doontaa muuqaalkaaga soo-gaadhis ama u gubasho suurtagal ah. Marka la eego dheelitirka caddaanka, waxaan kugula talin lahaa inaad ku dhaafto ikhtiyaarka otomaatiga ah maxaa yeelay badanaa waxay u shaqaysaa si dhammaystiran muuqaallada lagu maydho iftiinka qoraxda.
Ka taxaddar halabuurka
Hal cunsur oo ka soo muuqan doona sawiradaada ayaa noqon doona jihada, markaa waa muhiim inaad markasta diiradda saarto dareenkaaga oo aad hubiso inay toos u muuqato. Haddii aad raadineyso inaad soo qabato halabuur iyo dhacdooyin isku dheelitiran, waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid tan. Dabcan, haddii aad rabto inaad ka shaqeyso muuqaallo aad u dhib badan ama dhaqdhaqaaq leh waxaad ka dhigi kartaa inay u muuqdaan kuwo qaloocan, laakiin adigoon dulmarin, dhammaan sawirrada taxanaha ah isku mid ma noqon karaan! Hubso inay jiraan noocyo. Meelaynta cirifka sidoo kale waa arrin khuseysa. Guud ahaan, halabuurku wuxuu wax badan ka heli doonaa qoto dheer iyo hodan muuqaal haddii aan u dhigno qeybta saddexaad ama saddexaad. Sida shayga dareenka, iskuday inaadan dhigin bartamaha halabuurka maxaa yeelay waxaad la kulmi doontaa monotony.
La dagaallan qorraxda oo ka shaqee iftiinka
Sida aan wada ogsoonahay, qorraxdu waxay noqon kartaa dhibaato oo hadaan kuhayno gadaasha mawduuca ama shayga aan sawireyno. Waxyaabaha ay tahay inaan iska ilaalino qiima kasta ha lahaadee ayaa ah in falaadhaha qorraxda ay si toos ah ugu dhacaan ujeedada kamaradeena maaddaama ay taasi dhacdo, saameyno aan loo baahnayn sida milicsiga iyo luminta kala duwanaanshaha ayaa dhici doona. Xaaladda noocan ah, waxaa ugu wanaagsan in la doorto parasol ama si toos ah loo bixiyo hooska oo looga ilaaliyo falaadhaha qorraxda gacmaheenna, dabcan ka taxaddar in uusan ku jirin sawirka.
Si loola dagaallamo iftiinka gadaal, waxaa jira farsamo aad wax ku ool u leh oo ka kooban cabbiraadda isbarbar dhiga hooska oo sidan ayaan ku helaynaa sawir fure sare ah. Haddii aan wax ka qabanno oo aan ku cabbirno aagga uu daadadku ifiyay, waxaan gaari doonnaa silhouettes ka maqan oo faahfaahsan meelaha hadhka leh. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa iska caadi in tijaabooyinka ugu horeeya aan helno aagag ku gubtay waxyaabo badan oo ka duwan, si kastaba ha noqotee, iyadoo lagu saleynayo baaritaanka, waxaan awoodi doonnaa inaan helno natiijo aan fiicneyn. Dulqaad!
Toosh leh mise bilaa flash?
Marka hore, waxay umuuqataa wax aan micno lahayn in flash lagu isticmaalo aag u ifaya sida xeebta oo kale. Si kastaba ha noqotee, awooddan weyn ee iftiinka ku jirta waxay abuurtaa kala duwanaansho weyn oo u dhexeeya aagagga iftiinka iyo hooska sawirradeenna. Tooshka ayaa si aad ah loogu talinayaa inuu bixiyo dhexdhexaad ama buuxiyo nalalka sidaas darteedna uu u jilciyo farqiga u dhexeeya si looga fogaado soo bandhigid gaar ahaan iftiinka gadaal. Waa inaan maanka ku haynaa in awoodda tooshku ay kooban tahay oo wixii ka sarreeya ay waxtar u yeelan doonto sawirrada.
Falanqee jawigaaga waxqabad
Kahor sameynta casharkaaga waxaa had iyo jeer lagugula talinayaa inaad taqaanid dejinta. Haddii ay tahay goob aad booqaneyso markii ugu horeysay, ku soo lugee xeebta inta aad kari karto. Raadi raadinta ujeeddooyinka xiisaha leh, aagagga qurxoon iyo dadka laga yaabo inay xiiseeyaan sawirradaada. Xusuusnow in qorax dhaca iyo soo baxa qorraxdu badanaa bixiyaan wax badan oo qurux ah oo ay yihiin wakhtiyo xasilooni weyn taas oo kuu oggolaan doonta inaad ku qaadatid sawir muuqaal leh xasillooni iyo dareemo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » 9 talooyin ku saabsan sawir qaadista xeebta
Aasaas u ah sawir qaadayaasha: Fasalada Lens